Imikhiqizo Abakhiqizi & Suppliers - China Imikhiqizo Factory
Sine ebanzi kakhulu umkhiqizo uhla ukukhonza ikhasimende izikhwama ahlukahlukene emaphaketheni kusuka izimpahla ngobuningi ukuba isitokwe, ezokuthutha kanye ukudayiswa. Izikhwama zethu emaphaketheni okuthwala impahla 5kgs kuze kube 2000kgs kunothile izinhlobo etholakala Ukucaciswa ezahlukene ngokusho ukusetshenziswa kwayo kokugcina.
Ukuze efanayo ebalulekile ingxenye ingxenye imikhiqizo yethu, futhi sinikeza izikhwama nsuku zonke nenkambiso ahlukahlukene ukuyothenga futhi uhambo, njll
I ikakhulukazi izinto ezenziwe ukuze izikhwama zethu plastic (polypropylene, polythene) nokotini. Kulula ukwenza sibe ububanzi kakhulu umkhiqizo ezahlukene. Kungenzeka sihlanganise ezahlukene kk nokwelukiweyo lendwangu ezahlukene cotton ngendwangu okwenza amaqembu amabili izikhwama ekufakeni, eyodwa umkhakha nomunye ukusetshenziswa nsuku zonke.
Ngokwesibonelo, siyakwazi ukukhiqiza kk kudala cishe yonke imininingwane kanye nezinhlobo. Sabe ukukhiqiza izikhwama emaphaketheni njengoba ikhasimende ngalinye 'imfuneko yezimpahla ngobuningi, ngaphezu kwalokho, thina sicubungula Indwangu kk ukuze plastic izikhwama elisetshenziswa nezitolo ezinkulu nge abanye izesekeli efanelekayo njengoba ikhasimende' imfuneko.
Njengoba ngaleyo ndlela, thina cishe zingaba izikhwama ehlukahlukene ukwanelisa ezahlukene ikhasimende 'imfuneko.
Ngemva umkhakha izikhwama kanye nezikhwama nsuku zonke, siye ithuthukiswe nezinye
izinto houseware, ezifana amaphinifa, ilondolo izikhwama, beddings, njll okuyinto manje ohlwini phakathi imikhiqizo yethu enkulu.
Ububanzi WETHU UMKHIQIZO:
A. Impahla Izikhwama for Imboni: izikhwama Big, PP / PE izikhwama nokwelukiweyo PE ifilimu izikhwama, anezikhala izikhwama, Paper izikhwama, Ukotini izikhwama, OPP yokuvikela ngocwazi izikhwama.
B.Packaging Izikhwama Ukuze Daily Sebenzisa: PP izikhwama, Ukotini izikhwama, Canvas izikhwama, Oxford izikhwama, Jute izikhwama, izikhwama Cooler, Garden izikhwama, Paper sesikhwama sokuthenga.
C. Housewares: iphinifa, Gloves, zombhede, izingubo izikhwama, pillowcase izikhwama, izingubo zangaphansi izikhwama, njalonjalo
D. Imayini ukuhlola: incwadi Paper inothi, Orange RC imbobo plugs, isikhwama Plastic nge uziphu, vimba Plastic, Aluminium Perma ithegi, Pin umaka, Test ngesihlungo, Core ugqoko galv., isikhwama Calico, Veggie ngesihlungo, uthayi Plastic, Ipotimende ibhande, Gloves, Mapping jacket, Kraft isikhwama paper, Ilanga isigqoko.